musha > Rovedza Kufamba Italia > 5 Best Natural Hot Springs In Europe
nyanza, nzizi, uye munyanza havasi chete yakanaka dzinongoitika nezvishamiso kuti vari ukoshi kuronga zororo kumativi. Tiri zita redu 5 Best Natural Hot Springs In Europe kuti vari kupfuura inokosha kushanya tichibatsirwa Save A Train chitima matikiti.
5 Best Hot Springs In Europe 1: Aix Les Bains riviéra Of The Alps, Furanzi
Aix Les Bains, Rwizi rweAlps iguta rinopisa, berthed pamusoro kusimba zvekumwe uye rakapamhamha Lake Bourget. Uyu ndiwo mumwe 5 Best Natural Hot Springs In Europe uye ndiye found deep in the Savoie french area, inozivikanwa kwayo Alps massif nharaunda. Kuvapo mvura yakachena, navazhinji chicherwa unhu, zvose kumativi guta, anoritungamirira muropa chafariz tsika iyi. nzvimbo iyi mashiripiti chaizvo anokupa yakanakisisa zvakasikwa nokuda kwenyu zvakanaka hwakanaka. In Aix más Bains Alps riviéra, zvepanyama mushonga uye nesarufa akapfuma mvura zvinobatana kupa patsva kwechokwadi.
Geneva kuna Aix Les Bains Le Revard Train
WekuLausanne kuna Aix Les Bains Le Revard Train
Paris kuna Aix Les Bains Le Revard Train
Bern kuna Aix Les Bains Le Revard Train
2: Terme dari Saturnia - Tuscany, Itari
Easy kuti ikoko kubva zvinenge zvapo Europe tichibatsirwa Save A Train, Tuscany Unozviti chimwe chezvinhu rine runyararo matsime emvura inopisa munyika. saka, hakuna Ndokusaka yedu mazita 5 Best Hot Springs In Europe! ne 500 marita pakati kuchirapa mvura kuitwa pumped kubva pane kuputika mwena ose wechipiri, chitubu mvura iri zvachose wakachena. Nemhaka 99.5 madhigirii F nemvura Vakamupfekedza Italian nzvimbo rakapoteredzwa, hapana mubvunzo kuti unenge vapedzisire rakadzika mamiriro dzokuzorora chitubu ichi.
Izvi Spa chafariz anozviti kuva chero vakaenzana munyika. Pachifanira mvura kuti zvinotarisirwa simba, vakachena uye akapfuma chicherwa munyu. A chipo zvakasikwa iyo inoita Spa madziva sezvo inoyerera kubva tsime kufambidzana shure zvemakore. Why not try it out for yourself?
Florence kuna Grosseto Zvitima
Perugia kuna Grosseto Zvitima
Viterbo kuna Grosseto Zvitima
Rome kuna Grosseto Zvitima
5 Best Hot Springs In Europe 3: Aqua Dome - Tyrol, Ositiriya
Kubvira muzana remakore rechi16, vanhu vave vachishanyira Tyrol kubatsirwa achiporesa ehupfumi vayo zvitubu zvemvura inopisa. Zvino unogona kunakidzwa makuru emvura uye chafariz madziva vakazadzwa 90 nhambwe F kuti 97 madhigirii F kuchafadza mvura chafariz. Chii chinoita chitubu ichi nedzimwe kwayo levitating chafariz mvura nembiya, akazara zviedza, masaja zvigaro, uye whirlpools.
Ziso ndibate mavakirwo mavambo Spa horo anoratidza runako zviriko dzakapoteredza. danda, ibwe, chiedza uye – ehe saizvozvo – mvura chikamu naka girl. A dzinokwana 12 indoor uye makomba madziva akakukokai kushambira uye regai pachako kukukurwa. The indoor madziva vari chokuita vatatu unoshamisa makomba madziva ari stilts kuburikidza waterways.
Hot Springs In Europe kuti vari kutoita zvokutamba uye nenhoroondo? Zvinoita sokuti zvakanaka nzira tick vamwe bhakiti mazita zvinhu mune imwe zvinofambidzana. In moyo muguta Bath, uchawana Thermae Bath Spa. An mubairo kuhwina rwokuzvarwa Spa yaunogona ikozvino kunogeza Britain chete sezvingatarisirwa kudziya, akapfuma chicherwa mvura. Sezvinongoita vaCelt uye vaRoma vakaita pamusoro 2,000 makore apfuura. It, zvisinei, chichiri kumba Britain zvoga chafariz mvura. Gamuchirai pakupedzisira. rudekaro ruzivo. Shanyira mubayiro uyu richakunda zuva spas chicherwa vapfumi mvura kudziyirwa pa 92 madhigirii F uye nounyanzvi Spa kurapa.
5 Best Hot Springs In Europe 5: Gellert monument, Hangari
Isu wapa yakaisvonaka yokupedzisira mumabhuku edu. Kana uchida kunzwa sokuti youmambo, kunyange kwemaawa mashomanana, unofanira zvachose kushanyira Gellert monument muHungary guta, Budapest. In yayo embellished marongerwo uchawana huru inodziya dzokugezera mitsetse veRoma mbiru. Iyi mvura ine zvikamu zvakasiyana izvo zvinobatsira pakurapa arthritis uye mamwe matambudziko emapfupa. Gellert Bath yakavhurwa 1918 kupa somushonga mvura kurapa vachishandisa chete rakadzika zvitubu ari Knights pamusoro St John akashandisa muzana remakore rechi12, uye gare gare vokuTurkey kunzwa kutonhorera masimba zvicherwa mupfumi mvura.
Ready zvichitambudzwa kutandara panguva yayo zvikuru akasiyana? Zvadaro musoro pamusoro kuti Save A Train uye bhuku chitima tikiti nemumwe Sarudza kwedu 5 Best matsime emvura inopisa Europe.
Unoda embed yedu Blog romukova “5 Best Natural Hot Springs In Europe” pana yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-hot-springs-europe/- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Kana uchida kuva nomutsa vanoshandisa dzenyu, unogona kuvatungamirira zvakananga kunyika yedu mapeji kutsvaka. In batanidzo ichi, muchawana yedu rinofarirwa kupfuura chitima pakutengeserana – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/it_routes_sitemap.xml, uye iwe unogona kushandura / kuti / TR kana / of uye mimwe mitauro.